39-Guurada Socdaalkii Anwar Al-Sadaat Kaga Degay Caasimadda Yuhuuda Ee Tel-Aviv – Wargeyska Saxafi
39-Guurada Socdaalkii Anwar Al-Sadaat Kaga Degay Caasimadda Yuhuuda Ee Tel-Aviv
Sagaal iyo soddon sanadood ayaa ka soo wareegay socdaalkii lama filaanka ahaa ee Madaxweynihii hore ee dalka Masar Maxamed Anwar Al-Sadat uu kaga degay, caasimadda Yuhuuda ee Tel-Aviv, kaas oo xili aan la filayn iyo mid aan saadaasha lagu darsan ahaa.
Anwar Al Sadat ayaa 19-kii Bishii November 1977-kii ka degay magaalada Talaabiib, waxaanu socdaalkaasi ku beegnaa sanad iyo maalmo uun ka dib, dagaalkii waynaa ee Carabta iyo Yuhuuda dhex maray, kaas oo saameeyay waddamo badan oo bariga dhexe ku yaala.
In kasta oo Anwar Al-saadaat uu go’aanka nabad raadinta qaatay maalmo ka dib markii xabad joojintii dagaalka, uu golaha ammaanka ee qaramada midoobay ku baaqay dhaqan gashay, waxaaa sida taariikh yahanada dunidu qoreen uu Anwar Al Sadat baadhitaano badan oo uu sameeyay iyo xog ururintiisa ku ogaaday in saraakiishii sar sare ee ciidamadiisa iyo is xulafaysigii carbeed ay dhalanteed waxba kama jiraan uu noqday guulna aan lagu gaadhi Karin.
Madaxweyne Saadat ayaa xiliga uu ka degay magaalada Tel-Aviv, xaaladda iyo siyaasadda dunidda labaduba aad uga duwanaayeen, carsigan aynu joogno, waxaana sida taariikh yahanada reer Galbeedku ku doodaan, uu Anwar Al-saadaat Soo af-jaray sadex dhaqan ee diidmada ahaa ee carabtu la hor taagnaayeen Yuhuuda, kuwaas oo kala ahaa (Nabad la qaadan Mayno, Aqoonsan mayno, Tanaasulna u samayn mayno Israel.)
Dhinaca kale carab badan iyo khubarada Islaamka ayaa guusha kaliya ee Sadat uu socdaalkaa iyo nabadii uu la qaatay Israel, marka ay hadlayaan sheega in kaliya uu joojiyay dagaalkii iyo dhiigii shacabkiisa reer Masar, balse uu awoodii carabta wiiqay, meeshana ka saaray isku duubnidii uu dhisay madaxweynihii ka horeeyay ee Jamal Abdi Nasir.
Dhinaca Masar marka laga eego, waxa uu Sadat helay in loo celiyo dhulkii masaarida ka maqnaa sida gobolka Siinay, waxa kale oo uu kasbaday kalsoonidii reer galbeedka iyo dhaqaale badan inay siiyaan dalkiisa.
Socdaalkani wuxuu cadho ku abuuray carabta, manay dhicin balan qaadyadii uu ka hor akhriyay golaha barlamaanka Israel, laakiin waxa lagu xasuustaa socdaalkan, soo dhawayntii waynayd ee Israel, Maraykanka iyo reer Galbeedku u sameeyeen Anwar Al Sadat.
Waxa kale oo lagu xasuustaa inuu noqday hogaamiyihii ugu horeeyay carabta iyo Islaamka ee Yuhuuda aqoonsada, barlamaankooda ka hor khudbadeeya, heshiis buuxa la gala, nabad iyo wada noolaanshana u balan qaada.
Ficiladii cadhada ahaa ee lagaga jawaabay heshiiskii uu Madaxweyne Anwar Al Sadat la galay, Yuhuuda waxa ugu waaweynaa, dilkii isaga laftiisa lagu khaarajiyay, qaar ka mid ah ciidamada milatariga dalkiisuna ku sadqeeyeen 6-dii October oo ah maalinta la xuso guushii ciidamada Masar ay ku jabsheen Yuhuuda kagana talaabeen difaacii adkaa ee Baarleef loogu yeedhi jiray.
Dhinaca Israel waxa isna lagu khaarajiyay oo Yuhuuda xag jirka ahi ku guulaysteen inay dilaan, Raysal Wasaare Isxaaq Rabiin oo isagu ahaa qofka kaliya ee la rumaysan yahay Inuu ugu dabacsanaa Yuhuuda maalin cad garoon kuwa kubada lagu ciyaaro ah uu wiil dhalinyaro ah oo lagu magacaabo Ilon Egal uu ku dhex toogtay ilaaladiisi oo uu dhex socdo.
Waxa iyaguna ka sii daray, dhibaatadii reer Falastiin Yuhuudu ku haysay, waxa xasuuqyo tiro badan ay Israel ka gaysatay, Lubnaan, Gaza, Khaliil iyo meelo kale oo tiro badan, kuwaas oo dhamaantood Masar Markhaati iyo saaxiib wanaagsan oo Israel taageera ay ka noqotay, madaxweynihii isaga ka danbeeyay ee Xusni Mubaarakna sii waday, ilaa walina aan joogsan.
November 29, 2016 Wargeyska SaxafiAnwar, Egypt, Israel, Masar, Maxamed Anwar Al-Sadat, Sadat, Sannadguuro, Socdaal, Tel-Aviv
Previous Previous post: Tartanka Hasha Ugu Quruxda Badan
Next Next post: Algeria Oo Dhismaha Jidadka Kaga Dheeraysay Dalka Japan